Posted by koburma.
ရန်ကုန်မြို့ဧ။်ယနေ့ ရာသီဥတု
အင်္ဂလိပ် မှ မြန်မာဘာသာသို့ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လိုလျှင် . အင်္ဂလိပ်နှင့် အခြားဘာသာများ အပြန်အလှန် ဘာသာပြန်ရန်။
၁။တရားတော်နှင့်စပ်လျှင်းသောစာအုပ်များ ၂။၀ိဥာဉ်သစ်စာအုပ်စဉ် ၃။သတင်းစာ။ဂျာနယ်များ (၂၂)စောင်
(To write with Myanmar front)မြန်မာစာရေးရန်
အသစ်ပေါ်တဲ့ ၀ိဇ္ဖာနဲ့ရေးချင်ရင် ဇော်ဂျီနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုလည်း http://www.mandalayalpha.com/
ကျွန်တော် သိသလောက်လေးတွေဝေမျှထားတာပါ။ အတတ်နှိင်ဆုံး ကြိုးစားဖော်ပြပေးပါမယ်။ ................................................................... ... ..............................................................